The Rohingya News Bank : NUG
Showing posts with label NUG. Show all posts
ရိုဟင်ဂျာအရေးအတွက် ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေကို NUG ပြန်သုံးသပ်မည်
ဖေဖော်ဝါရီ ၁ နောက်ပိုင်း အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ၏ ပြစ်မှုများကို ICJ တရားရုံး၌ စီရင်ခွင့်ရရန် NUG က မျှော်လင့်ထားသည်
၂၀၁၇ အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်နေ့က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်သို့ ထွက်ပြေးခိုလှုံရသော ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များ (ဓာတ်ပုံ - REUTERS)
ရိုဟင်ဂျာအရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ရပ်တည်ချက်ထုတ်ဖော်ပြောကြားရန် ဖိအားပေးခံနေရသည့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) က ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေကို ပြန်လည်သုံးသပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ယမန်နေ့ (ဇွန် ၃) တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။
ရိုဟင်ဂျာများကို နိုင်ငံမဲ့အခြေအနေသို့ တွန်းပို့ပေးလိုက်သည့် အခြေခံအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အသစ်ပြဋ္ဌာန်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ်တစ်ရပ် ရေးဆွဲပြီးချိန်တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း NUG ၏ ထုတ်ပြန်ချက်က ဆိုသည်။
Labels: ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပေ, 2021, mm, NUG, ရိုဟင်ဂျာအရေး
National Unity Government Policy Position on the Rohingya in Arakan State
Labels: 2021, Arakan State, en, NUG, Policy, Press Release, Rohingya
National Unity Government Press Release ( 03 June 2021 )
Labels: 2021, en, NUG, Press Release, Rohingya
PHOTO: The People's Defence Force in Myanmar releasedavideo showing battle ready new troops. (via Twitter video screengrab)
Labels: 2021, Defence Force, en, News, NUG
Bangladesh may be forced to recognize Myanmar’s national unity government
Rohingya refugees receive aid distributed by local organizations at Balukhali makeshift refugee camp in Cox’s Bazar, Bangladesh, Sept. 14, 2017. (Reuters)
As Bangladesh continues to struggle to provide adequately for the Rohingya refugees in Cox’s Bazar, near the border with Myanmar, the best possible solution for everyone involved — from the Rohingya themselves to their hosts — would be if the refugees could safely return home to their ancestral lands. But, whereas the previous government of Myanmar under Aung San Suu Kyi at least pretended it was interested in allowing the Rohingya to return, the new military junta has already indicated it will stop pretending altogether.
Labels: 2021, Article, Bangladesh, Cox's Bazar, en, Myanmar, NUG, Rohingya
လက်နက်ကိုင်တိုက်သူတွေ လူ့အခွင့်အရေးပေါ် ဘယ်လို သဘောထားသင့်လဲ (ဦးအောင်မျိုးမင်းနှင့် ဆက်သွယ်မေး မြန်းချက်)
ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရိုဟင်ဂျာလို့ခေါ်ဆိုတာကို တရားဝင်လက်ခံတာ အပါအဝင် NUG ရဲ့ ရပ်တည် ချက်၊ မူဝါဒ တိတိကျကျကို မကြာခင်ရက်ပိုင်းအတွင်း ထုတ်ပြန်ဖို့ရှိတယ်လို့လည်း ဦးအောင်မျိုးမင်းက ပြော ပါတယ်။ ကိုကျော်ကျော်သိန်းက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ Link : Here
Labels: ရိုဟင်ဂျာ, 2021, Audio, mm, NUG, ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်, ဦးအောင်မျိုးမင်
ရိုဟင်ဂျာဆိုင်ရာမူဝါဒ NUG ရှင်းလင်းချက်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ Kutupalong ဒုက္ခသည်စခန်းတွင်းက ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များ။ (သြဂုတ် ၂၅၊ ၂၀၁၉)
NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ အနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မူဝါဒ အခိုင်အမာ ရှိနေကြောင်း အမေရိကန် လွှတ်တော်အမတ်တွေကို ရှင်းပြနိုင်ခဲ့တယ်လို့ CRPH နိုင်ငံတကာကိုယ်စားလှယ် ဦးထင်လင်း အောင်က ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းပတ်က ဝါရှင်တန်ဒီစီအခြေစိုက် the Wilson Center က ကြီးမှူးပြီး NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ အမေရိကန် ဝါရင့်လွှတ်တော်အမတ်တွေ၊ ထိပ်တန်း နိုင်ငံရေး သမားတွေနဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေ နေရပ်ပြန်ရေးနဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် အစီအစဉ်ကို အသေအချာဆောင် ရွက်သွားမယ်လို့ NUG က ပြောကြားခဲ့တာပါ။ အပြည့်အစုံကို မအင်ကြင်းနိုင် တင်ပြပေးထားပါတယ်။
Labels: ရိုဟင်ဂျာ, 2021, mm, NUG, မူဝါဒ, သတင်း
ရိုဟင်ဂျာတွေ နေရပ်ပြန်နိုင်ရေးနဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရ ရေး လုပ်ဆောင်မယ်လို့ NUG ပြော
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန်ဒီစီ အခြေစိုက် ဝီလဆင်စင်တာကနေ မနေ့က ပြုလုပ်တဲ့ မြန်မာ့အရေးေ ဆွးနွေး ပွဲမှာ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ NUG အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦး တက်ရောက်ပြီး မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
Labels: 2021, mm, NUG, Video, ရိုဟင်ဂျာ, သတငျး, အသိအမှတ်ပြုရေ:း
By LAETITIA VAN DEN ASSUM and SEAN BAIN | FRONTIER
The mass street protests of February featured regular displays of inter-ethnic solidarity, but making space for more marginalised groups like the Rohingya will requireagreater political transformation. Here, the flags of various ethnic groups are help up at an anti-coup demonstration in Yangon on February 18. (AFP)
Myanmar’s struggle for democracy is underpinned byacommon aspiration foradifferent future – one free of military rule and the crimes, plunder and discrimination that comes with it. But it is not year clear whether this future includes all of Myanmar’s people.
Labels: 2021, Article, en, Human Rights, Myanmar, NUG, Rohingya
File Photo: Myanmar's United Nations ambassador Kyaw Moe Tun
Labels: 2021, en, News, NUG, Rohingya issue, U Kyaw Moe Tun, US Lawmakers
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တရားဝင်အစိုးရအဖြစ် NUG ကို အသိအမှတ်ပြုဖို့နဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရှိနေတဲ့ မြန်မာအစိုးရ ရန်ပုံငွေကို မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားအတွက် NUG အနေနဲ့ ထိန်းချုပ်ခွင့်ပြုဖို့ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းက အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
အင်္ဂါနေ့က အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီမှာ ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်နဲ့ ပြုလုပ်တဲ့ မြန်မာ့အရေး ကြားနာပွဲမှာ သံအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းက မြန်မာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအပေါ် ပစ်မှတ်ထား ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုတွေဟာ မြန်မာ့အကြပ်အတည်းဖြေရှင်းရာမှာ ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းတခုဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Labels: 2021, mm, NUG, ဦးကျော်မိုးထွန်